Otú nyefee Video ka iPad enweghị iTunes
> Resource> iTunes> otú nyefee Video ka iPad enweghị iTunes
Enwere ụzọ na-etinye na fim na gị iPad enweghị etinye ha na iTunes? M na-anyị niile na fim na a iche iche na kọmputa, na-amasị m na-enwe ike tinye ha na iPad enweghị etinye ha na m bụ isi na kọmputa na m iPad na-synced na. Enwere m ike iji Cyberduck ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ omume na-eme nke a? Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inye m a mkpirikpi ije site nke nzọụkwụ m ga-aghọta nnọọ na ya!
Mgbe ọ na-abịa na-ebufe video ka iPad, iTunes bụ eleghị anya onye mbụ na-egbu maramara site n'obi-unu. Hoo haa na-ekwu okwu, ị na-ekwe ka ime nke ahụ. Otú ọ dị, ị ga-doo anya na iTunes ga-ewepụ ugbu a ọdịnaya na gị iPad tupu syncing, karịsịa mgbe kọmputa na-adịghị onye na-gị iPad-emekarị mmekọrịta ka. Scratching gị isi banyere ya?
Otú e si etinye vidiyo na iPad enweghị iTunes
Echegbula. Ọ bụ adịghị ike nyefee video ka iPad enweghị iTunes. Ị nwere ike nweta enyemaka site na ụfọdụ 3rd otu ngwaọrụ. N'etiti ha, nke Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ ebe a na-echere. Ọ na-tumadi ji maka na-enyefe faịlụ na site na ngwaọrụ gị na lossless mma. Ugbu a, na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú idetuo video ka iPad na ngwá ọrụ a. Pịa bọtịnụ n'okpuru ibudata ma wụnye ngwá ọrụ a na kọmputa.
Ebe ọ bụ na Mac version na windows version ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ, ebe a, m na-agbalị nnọọ na Windows version na-agbalị transfering video ka iPad enweghị iTunes.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị ngwá ọrụ
Gbaa ndị Wondershare MobileGo na jikọọ na gị iPad na kọmputa site na eriri USB. Ngwá ọrụ a ga-iṅomi gị iPad ma na-egosi gị iPad na ya bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Copy video ka iPad enweghị iTunes
Na ekpe sidebar ụfọdụ taabụ. Pịa Media. N'elu akara nke ndị ziri ezi ebi ndụ, ị pụrụ ịhụ Music, Movies, TV egosi>, Pọdkastị, Music Videos, iTunes U na Audiobook. Họrọ a video ụdị, Ebe a, na-ahapụ 'na-Movies dị ka ihe atụ.
Site na ịpị Movies, ị na-nkiri management window. Pịa Tinye ma ọ bụ pịa triangle n'okpuru Add> Tinye nchekwa ma ọ bụ Tinye File. Faịlụ nchọgharị window-abịa si. Họrọ fim ma ọ bụ ihe nkiri nchekwa ị chọrọ nyefee si na kọmputa na-iPad. Pịa Open nyefee ha gị iPad.
Ọ bụrụ na ndị videos na ị na-ebufe ka anaghị akwado na iPad, ị ga-enweta a mmapụta dialog. Ọ jụrụ gị ma ị chọrọ iji tọghata na nyefee video gị iPad ma ọ bụ. Pịa Ee. Mgbe ahụ, ngwá ọrụ a na-amalite iji tọghata ma nyefee videos. The converted videos ga-MP4 usoro. Mgbe nyefe a rụchara, videos ga-adị gị iPad.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị tọghata ma tinye videos ka iPad enweghị iTunes site na iji Mac version, converted video ga-M4V usoro.
Na Wondershare TunesGo, ebufe video ka iPad enweghị iTunes pụrụ ịbụ nnọọ mfe. N'ihi ya, oge ọzọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee video ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ site na kọmputa ma ọ bụ mpụga ike mbanye ka iPad, i nwere ike ịgbalị ngwá ọrụ a. Ị ga-ahụ ọ na-eme gị mobile ndụ ukwuu adaba.
Olee otú Hichapụ oyiri Songs on iPad
Otú nyefee Files Site Mac ka iPad
Olee otú mmekọrịta iPhoto Pictures / Photos ka iPad
3 Ụzọ iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ
Nyefee Music si mpụga ike mbanye ka iTunes
Olee otú iji weghachi iPhone enweghị iTunes
Olee otú Naghachi Lost Ndi ana-akpo site na iTunes ndabere File
Olee otú Embed osise Gị iTunes Library na ogbe
Otu Pịa Mbubata Multiple Lyrics ka iTunes
Olee otú Record Pandora ka iTunes